Lelee ụgwọ dollar, ị ga-ahụ nọmba Oghere Usoro ahụ. Na nlele, ị ga-ahụ usoro ntụgharị na nọmba akaụntụ. Kaadị akwụmụgwọ gị nwere nọmba kaadị kredit. Nọmba ndị a na-abanye na otu ebe - ma na nchekwa data gọọmentị ma ọ bụ usoro ụlọ akụ. Ka ị na-ele dollar, ị maghị ihe akụkọ ya bụ ezie. Ikekwe ezuru ya, ma ọ bụ ikekwe ọ bụ nke adịgboroja. Kasị njọ, njikwa njikwa data nwere ike ịmegbu site na ibipụta ọtụtụ, na-ezu ohi ha, ma ọ bụ na-ejikwa ego - na-ebute mbibi nke ego niile.
Gịnị ma ọ bụrụ na… na ụgwọ dollar ọ bụla, ego, ma ọ bụ azụmaahịa kaadị akwụmụgwọ, enwere igodo nzuzo ezoro ezo nke enwere ike iji nweta ndekọ ndekọ azụmahịa ahụ? Enwere ike ikwenye ego ọ bụla na nzuzo site na nnukwu kọmputa nke kọmputa - ọ nweghị ebe ọ nwere data niile. E nwere ike ikpughe akụkọ ihe mere eme site na Ngwuputa data n'oge ọ bụla, gafee netwọk nke sava. Mpempe ego ọ bụla na azụmahịa ọ bụla a na-eme ka ọ dị mma iji mata onye nwe ya, ebe o si bịa, na ọ bụ eziokwu, na ọbụlagodi azụmahịa ọzọ ma ọ bụrụ na ejiri ya na azụmahịa ọhụrụ
Ezie na enwere ọtụtụ ụda na Bitcoin ugbu a, aga m agba gị ume ileghara ọtụtụ akụkọ anya ma lekwasị anya na teknụzụ na-akpata. Ọtụtụ ndị na-agụghị akwụkwọ, ndị ọkachamara na-abụghị teknụzụ jiri Bitcoin tụnyere ọsọ ọla edo, ma ọ bụ afụ ngwaahịa, ma ọ bụ ọbụlagodi fad. Nkọwa na atụmanya ndị a nile karịrị akarị. Bitcoin dị ka ego ọ bụla ọzọ kere, ekele na teknụzụ blockchain. Ngọngọ bụ teknụzụ dị mgbagwoju anya chọrọ ike Mgbakọ dịka anyị na-achọbeghi ya mbụ. A isi Ngwuputa azụmahịa nwere ike ịchọ iri puku kwuru puku dollar na akụrụngwa, na-efu ọtụtụ iri dollar, jiri nnukwu ike, wee chọọ minit ma ọ bụ oge ọrụ.
Nke ahụ kwuru, chee ebe ụwa ebe asambodo dijitalụ gị tụkwasịrị obi n'ihi na ọ nwere mkpịsị ugodi nke akụkọ ihe mere eme nke klaasị niile ị nyochachara site na ndị ọgbọ… na-enweghị ịkpọ ụlọ ọrụ asambodo ahụ. Worldwa ebe ị na - achọghị iji aka nyochaa ego azụmaahịa ma nwee ike, kama, ịchọpụta ọrụ ha rụzuru dị ka akọwara na ha nkwekọrịta ngọngọ-kwadoro ahịa. Mgbasa ozi nwere ike ijigide akụkọ nke ngosipụta ya na azụmahịa ya na onye na-pịa iji hụ na ọ bụghị usoro aghụghọ.